अन्य कागजातबाट तालिका घुसाउनका लागि, तालिका प्रतिलिपि बनाउनुहोस्, र हालको कागजातमा तालिका टाँस्नुहोस्.
पाठलाई तालिकामा रूपान्तर गर्न, पाठ चयन गर्नुहोस्, र रोज्नुहोस् गर्नुहोस् तालिका - रूपान्तर गर्नुहोस् - पाठलाई तालिकामा.
तालिकाका लागि विकल्प सेट गर्नुहोस्.
प्रतिमा घुसाइएको उपकरणपट्टीमा
घुसाउने उपकरणपट्टीमा, तालिका प्रतिमालाई घुसाउने तालिका खोल्नका लागि क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँले हालको कागजातमा तालिका घुसाउन सक्नुहुन्छ । तपाईँले बाँण पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, तालिकामा समावेश गर्न स्तम्भहरू र पङ्क्तिको सङ्ख्या चयन गर्न तान्नुहोस्, र त्यसपछि अन्तिम कक्षमा क्लिक गर्नुहोस् ।
LibreOffice - प्राथमिकताहरूउपकरणहरू - विकल्पहरू - LibreOffice राइटर - तालिका